Ndi Adobe SiteCatalyst na-efu Steam? | Martech Zone
Tuesday, October 2, 2012 Tọzdee, Febụwarị 25, 2016 Douglas Karr
Anyị nwere ndị ahịa ole na ole na Adobe SiteCatalyst… mana echeghị m na mmadụ ole na ole nwere ịhụnanya na ikpo okwu yana ọtụtụ atụmatụ ịdebe ya. SiteCatalyst, dị ka ndị ọzọ nchịkọta nyiwe, belata ọnụ ọgụgụ nleta ha ga-echekwa data na - nnukwu ọghọm nye onye ọ bụla na-akwa ụta maka nnukwu ụlọ ọrụ. Ma ebe ọ bụ na Adobe loro ha, ọ dị ka otu ụlọ ọrụ ahụ.
Achọrọ m ịmata nke a wee lelee ụfọdụ usoro ọchụchọ. Dị ka atụmanya na ndị ọrụ jiri ikpo okwu, ha na-achọkarị ha. N'okwu a, nyocha saịtị na nyocha Omniture pụtara ka ọ na-eme ala. Obi abụọ adịghị ya na nchịkọta Google na-ata ndị ahịa a niile nri - mana Omniture dị iche ruo nwa oge. Ndị ọrụ aka ha bara uru itinye ego na ntinye ego ebe ọ bụ na ha gara n'ihu na-enyere ndị ahịa ha aka. Amaghị m na nke ahụ na-eme ọzọ.
Ndị na-ere ahịa agnostic dị ka onwe m nwere ike ọ gaghị enyere aka, ma. Achọghị m ịrụ ọrụ na SiteCatalyst, mana ndị ahịa anyị nwere anaghị eme ya ọ bụla dị egwu. ChaCha mere ụfọdụ mara mma nke ọma site na mpaghara nke ibe ahụ ka ha wee mara ihe ọdịnaya na-adọta ma debe ọtụtụ ndị ọbịa… mana enwere ike ime ya na Google ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
SiteCatalyst na-enye ụfọdụ nkwalite ekwentị, mmekọrịta na mmekọrịta vidiyo and mana nke ahụ abụghị n'ezie ọdịiche ọzọ. Otu njirimara nke SiteCatalyst nwere ike ịhụ dị ka onye na-agbanwe egwuregwu bụ arụmọrụ:
Kensinammuo ọrụ interface-Na-ekpughe isi ihe na-azụ ahịa n'ịntanetị ngwa ngwa na mfe.
Nnweta oge-Nweta data site na iPad gị. Pịgharịa, swiiti, ma mbugharị n’ime oge ụfọdụ akọwapụtara. Tinye mmetụ ọhụụ ma ọ bụ akụkọ email site na iji mmetụ dị mfe.
Akpaghị aka mkpebi-Nịm akpaka ngosi nke omume triggers mgbe isi metrik gafere ma ọ bụ daa n'okpuru na-atụ anya.
Kedu ihe ị chere? You bụ ụlọ ọrụ hapụrụ Adobe SiteCatalyst? Nchịkọta ihe ọ bụ ihe ọzọ ị na-etinye na ya? N'uche m, ọ bụ ihe gbasara ikpo okwu yana ihe gbasara ụlọ ọrụ na-enyere gị aka ịga nke ọma. Ebe m na ndị ọrụ Webtrends rụkọrọ ọrụ, amaara m etu ha si eche maka ndị ahịa ha. Na-arụ ọrụ na ndị ahịa SiteCatalyst, echeghị m na mụ na onye njikwa akaụntụ Adobe agwala okwu!
Tags: adobeadobe saịtị saịtịomnituresaịtịcatalyst
Kọmputa Mmezi Portland
Ọkt 2, 2012 na 2:12 PM
M ga-ekwu eziokwu, echere m na Adobe na-efunahụ ọtụtụ ala n'ihi nsogbu Adobe Flash. Ọ bụ ezie na m maara na ebe nrụọrụ weebụ na-apụ na nke a, a ka nwere ọtụtụ ndị ga-enweta. Ị nwere ọtụtụ ndị ọrụ nwere nkụda mmụọ n'ebe ahụ. Ọ bụ ezie na ngwugwu imewe dị ukwuu… na-ebufe m na-eche na-emetụta ọnọdụ ahụ
Ọkt 16, 2012 na 7:03 AM
Nke ahụ bụ omume ahụrụ nke ọma n'ezie. Na LVMetrics, anyị na ndị ahịa na-amatawanye ikike Google Analytics na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ebugara ya ma jiri ya mee ihe nke ọma. Echiche ahụ abụghị ọbụna banyere ọnụahịa ọzọ, ọ na-egosi na ọ bụ ịghọta na ọ bụ naanị ọtụtụ ozi nwere ike iji mee ihe n'ụzọ ziri ezi site na ngwá ọrụ nchịkọta Weebụ na maka nke ahụ, Google Analytics na-arụ ọrụ nke ọma. Enwere ike iwulite ngwa dị ike site na iji Google Analytics API gụnyere nyocha ọkwa ndị ọbịa - ihe Omniture na-ekwu ogologo oge dịka ebe ire ere pụrụ iche. Nhọrọ n'ezie na-agbada na ntụnyere n'etiti 'si na igbe' atụmatụ nke SC, vs. njedebe GA nsochi + ntakịrị ndụmọdụ, anwansi data na ETL. Nke ikpeazụ na-emeri aka.